कांग्रेसले टुंगो लगायो गण्डकीमा मन्त्री बन्ने सांसदको नाम, को-को बन्दैछन् मन्त्री ? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
कांग्रेसले टुंगो लगायो गण्डकीमा मन्त्री बन्ने सांसदको नाम, को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले गण्डकीमा मन्त्री बन्ने सांसदको नाम टुंगो लगाएको छ । सरकार बनेको डेढ महिनापछी कांग्रेसले पाउने थप ३ मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको टुंगो लागेको हो ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसबाट स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ, तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मा र बागलुङका मणिभद्र शर्मा कँडेल मन्त्री बन्दैछन् ।
यी तिनै जना सांसद समानुपातिक निर्वाचित हुन् । यसअघि गत जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली सङ्गै सपथ लिएका कुमार खड्का पनि समानुपातिक सांसद हुन् । कास्कीका खड्काले अहिले शिक्षा, विज्ञान प्रविधी तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।
कांग्रेसले अब पाउने तीन मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला हुन् । यी तीन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने तय भैसकेको छैन । शुक्रबार १ बजे नवनियुक्त मन्त्रीको सपथ कार्यक्रम तय भएको छ । त्यहाँ नै मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन टुंगो लाग्ने छ ।
दिउँसो १ बजे प्रदेश प्रमुखको निवासमस कांग्रेसका तीनसहित माओवादीका पनि ३ जना मन्त्रीले सपथ लिँदैछन् ।
माओवादी केन्द्रले बिहीवार टुंगो लगाए अनुसार कास्कीका रामजी बराल अर्थ, बागलुङका चन्द्र बुढामगर कृषि र स्याङ्जाका दीपक घर्तीले वन तथा वातावरण मन्त्रीको रुपमा सपथ लिनेछन् ।